विविधा - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १०, २०७५
अतिवादको लाक्षणिक रूप
एमाले–माओवादी केन्द्र एकताको ८ महिना लामो छट्पटीपछि फेरि एकाएक नाटकीय रूपमा बौरिएर एमालेका दुई नेताको ‘रहस्यमय हत्या भएकै’ दिनलाई शुभसाइत मान्दै ‘एकीकरण’ हुनुले केही कौतुहलता अवश्य जन्माएको छ ।
मुलुकका प्राय: सबै क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार समग्र नेपालीको ठूलो टाउको दुखाइको विषय हो । २०४६ सालपछि भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि प्रत्येक नवगठित सरकार सैद्धान्तिक रूपमा सधैं प्रतिबद्ध रहे, तर अहिलेसम्म बनेका सरकारले त्यसमा सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।
स्थानीय सरकारमा सिमरौनगढ
उसो त सिमरौनगढको राजनीतिक परिचय अहिले एउटा नगरपालिकाको रूपमा हो । नेपालमा नवसंरचित अनेक नगरपालिका छन् । तर प्रदेश २ अन्तर्गत बारा जिल्लाको दक्षिणी सीमासंँग जोडिएको सिमरौनगढको परिचय यतिमा टुंगिंदैन ।
जेष्ठ ९, २०७५
जनमत दुरुपयोगको शृङ्खला
राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन फरक विचार र मार्गचित्र बोकेर क्रियाशील छौं, त्यसले हामीलाई निराश, शिथिल र पलायन हुने अनुमति दिंँदैन । राप्रपाको विजारोपण गर्दा हामीले मुलुकलाई एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति उपलब्ध गराउने संकल्प गरेका थियौं ।
खस्कँदो सिकाइ स्तर
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०६८ सालदेखि विभिन्न कक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रका प्रतिवेदनहरूले विगत ७ वर्षमा विद्यालय शिक्षाको सिकाइ स्तरमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र विभिन्न समूह बीचको सिकाइ स्तरको भिन्नता बढ्दै गएको समेत देखाएको छ ।
बिहे नगरे पनि आमा !
‘अब बिहे नगरे पनि महिलालाई आमा बन्ने अधिकार ।’ कान्तिपुरमा यो समाचार पढेपछि म निकै खुसी भएँ । संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्था गरिएको महिलाको प्रजनन सम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउन बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावलाई म खुलेर समर्थन गर्छु ।
छारे रोगका भ्रम
डा. रागेश कर्ण
एक किशोरीलाई अचम्मको रोग लाग्यो । उनी अचानक बेहोस हुन्थिन्, हातखुट्टा फलाम जस्तै कडा भई केहीबेर बिजुलीको करेन्ट लागेझैं हल्लिन्थिन्, सँगसँगै उनको मुखबाट फिँज आउने, कहिले जिब्रो टोकिने र दिसा–पिसाब छुट्ने गर्थ्यो ।
जेष्ठ ८, २०७५
के माओवादी विसर्जन भएको हो?
के २०७५ साल जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो? यो प्रश्न अहिले निकै चर्चामा छ । २०५१ मा जन्मिएको माओवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रुपान्तरण हुन २४ वर्ष लाग्यो । त्यसअघि के त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङको पार्टी थियो ? थिएन ।
विश्वको ध्यान खिच्ने एकता
लामो संशयबीच दुई मुख्य वामपन्थी पार्टीबीच जेठ पहिलो साता पार्टी एकता भएको छ । व्यक्तिवाद अर्थात व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यक्तिगत नाफा, व्यक्तिगत हितको सर्वोच्चता नै सारमा पुँजीवाद हो भने त्यसको ठिक विपरीत कम्युनिजमको मुख्य सार भनेको समुदायवाद हो ।
नेकपामा ‘पजनी’ र अधिनायकवाद
साँच्चै पार्टी एकता गर्न कठिन छ कि पार्टीको केन्द्रीय समिति बनाउन ? अहिले यस्तो प्रश्न सोधियो भने पार्टीको केन्द्रीय समिति बनाउन नै गाह्रो भएको उत्तर आउन बेर छैन । किनभने पार्टी एकता गर्नुभन्दा सकसपूर्ण भइरहेको देखिन्छ, पार्टीको केन्द्रमा कुन–कुन नेतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने काम ।
भाषामाथि प्रहार किन ?
डा. साधना प्रतीक्षा
केही दिनअघि विश्वविद्यालयको परिसरमा केही विद्यार्थी हस्याङ–फस्याङ गर्दैको अवस्थामा भेटिए । नेपाली भाषा बचाउ अभियान चलाइरहेका उनीहरू प्रचार–प्रसारका लागि सञ्चार माध्यमको खोजी गर्दै थिए ।
परराष्ट्रको दस्तुर परिपाटी
सम्पादकीय श्रावण १, २०७६
परराष्ट्रका नियोगहरू बाहिरी विश्वमा मुलुकको अनुहार देखिने र चिनिने ढोका हुन् । राष्ट्रको आत्मसम्मान दर्शाउने माध्यम पनि हुन् । तिनले मुलुकलाई बाहिर देखाउने र चिनाउने हुनाले हाम्रा...
नीर नृत्यको लीला
सीके लाल श्रावण १, २०७६
सामान्यतया उत्ताउलोपना पानीको नैसर्गिक चरित्र होइन । छहराहरू पहराबाट झर्छन् र आफ्नो बाटो खोज्छन् । खोलानाला कलकल गर्दै, ढुंगा पन्छाउँदै एवं माटो बगाउँदै आफ्नै सुरतालमा बग्छ । मैदानी...
न्यायिक सुधारको रणनीति
नृपध्वज निरौला श्रावण १, २०७६
नेपालमा २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास र सुधारको सुरुआत भए पनि न्यायक्षेत्र लामो समयसम्म राष्ट्रिय योजनाको प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन । मुद्दा छिन्ने अदालतलाई पनि योजनाको आवश्यकता...
ती ड्राइभर सा’ब
शान्ति श्रेष्ठ श्रावण १, २०७६
त्यो दिन मलाई भक्तपुरको सिद्धपोखरीछेउको क्लिनिकमा जानुपर्ने थियो । वानेश्वर चोकमा एक छिन कुर्दा भक्तपुरको ब्यासीको गाडी आयो र चढें । सबै यात्रु सिटसिटमा बसेका रहेछन्, आनन्दसाथ ।
तराई–मधेसको बाढी व्यवस्थापन
नित्यानन्द मण्डल श्रावण १, २०७६
केही दिनको अविरल वर्षाले निम्त्याएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभर जनजीवन कष्टकर भयो । तराई–मधेस पनि अस्तव्यस्त बन्यो । खाद्यान्न, लत्ताकपडा सब डुबे । पीडितहरू खाटमा खाट...
शीतल निवासको साख
सम्पादकीय असार ३१, २०७६
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा (अ)व्यवस्था भएको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण कार्यक्रमबारे कलाकारहरूले जेजस्तो अनुभूति गरे, त्यसले एकसाथ धेरै पक्ष अनावरण गरेको छ । थिति बसाल्न नसकेर...
गुटगत चूडाकर्मको शवपरीक्षा
नारायण ढकाल असार ३१, २०७६
केही समययता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चारैतिरबाट आलोचित भएका छन् । विपक्षी दलहरूको कुरा छाडौं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, लेखक, कवि, किताब उद्यमी र आर्थिक संसारसित...
बाढीमा माकःफुइँ राष्ट्रवाद
राजेन्द्र महर्जन असार ३१, २०७६
त्य ता के–के हुँदैछ, यता बाढी पसेरफेरि हामी दुःखीकै खायो मुटु–कलेजाहामी भयौं बेघरबार, हामी भयौं बेघरबारचरी लैजा समाचार, हामी भयौं बेघरबार !
कानुन मिच्ने नीतिगत निर्णय
गौरीबहादुर कार्की असार ३१, २०७६
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तारका क्रममा कानुन विपरीत विभिन्न निर्णय भएका छन् । २०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि चरणबद्ध रूपमा सबै जिल्लामा नापी भयो । त्यस बेला जग्गा जोत्नेको...
गुरु जस्तै गुरु मिले
एलिजा दाहाल असार ३१, २०७६
हेलेन केलर सत्र महिनाकी मात्र थिइन्, मस्तिष्क ज्वरोले सतायो । त्यसले उनको दृष्टि छिन्यो, श्रवणशक्ति पनि रहेन । उनी सात वर्षकी भएपछि पिताले छोरी पढाउन शिक्षिकालाई घर...